လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ website သို့မဟုတ် application အပေါ်တွင် သုံးစွဲမှု ရင်းနှီးမှုမရှိပါက အောက်တွင် မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကို ကျေးဇူးပြုပြီး လေ့လာစေလိုပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့၏ မေးခွန်းများအောက်ဖော်ပြပါတွင်မရှိခြင်းနှင့် အရေးတကြီးမေးမြန်းလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းလိုင်းနှင့် email များသို့ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Phone : 09968885673
Email : customerservice@ptbgo.com.mm
ကျွန်တော် ကျွန်မ တို့ PTB GO ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျေနပ်မှုမရှိပါက complaints@ptbgo.com.mm သို့ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။
Home Page တွင်ဖော်ပြထားသော Sign up ကိုနိုပ်ပြီး မိမိ၏ အချက်အလက်များကို form တွင် ဖြည့်ထည့်ပေးရပါမည်။ လူကြီးမင်းတို့ terms and conditions အား ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်တိကျသော အချက်အလက်များဖြင့် မှတ်ပုံတင်စေလိုပါသည်။
email address နှင့် ဖုန်းနံပါတ် တခုစီဖြင့် PTBGO အကောင့်တစ်ခုစီ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
ထည့်နိုင်ပါသည်။ လူကြီၤးမင်းအနေဖြင့် ပို့ဆောင်ရမည့်လိပ်စာကို တခုထပ်ပိုပြီး ထည့်နိုင်ပါသည်။ အမှာအော်ဒါတခုအတွက် လိပ်စာတခုတည်းကိုသာ ပို့ဆောင်နိုင်ပြီး မတူညီသော လိပ်စာကို ပို့ဆောင်လိုပါက အမှာအော်ဒါအားခွဲမှာယူရပါမည်။
ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email ID တူတူဖြင့် နောက်ထပ်အကောင့်များ ပြုလုပ်နိုင်ပါလား?
ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email ID တခုစီ ဖြင့်သာ PTB GO အကောင့်တခုသာ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ ပို့ဆောင်ရမည့် လိပ်စာတူပြီး ဖုန်းနံပါတ်၊ email လိပ်စာမတူပဲ တခုထပ်ပိုတဲ့ account တွေလုပ်လို့ရပါသလား?
ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။ စားသောက်ကုန်များကို ဝယ်ယူရာတွင် အချိန်ရဲ့အရေးပါမှုကို ကျနော်တို့ကောင်းစွာနားလည်ပါတယ်။
My Account (မိမိ၏ အကောင့်) ဆိုတာဘာလဲ?
My Account (မိမိ၏ အကောင့်) ဆိုတာ PTBGO အကောင့်ထဲသို့Log in ဝင်ရောက်ပြီးလျှင် ရောက်ရှိသည့် အပိုင်းကို ခေါ်သည်။ မိမိအကောင့်ထဲသို့ဝင်လျှင် မိမိ၏ လက်ရှိအမှာ အော်ဒါ၊ မှာခဲ့သော အမှာများ၊ မိမိ၏အချက်အလက်များ နှင့် အခြားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
Password ကို ဘယ်လိုပြန်သတ်မှတ်လဲ?
Forgot password (လျို့ဝှက်စကားဝှက် မေ့နေ) ကို နိုပ်ပြီး လူကြီးမင်း၏ email (သို့) ဖုန်းနံပါတ်အား ပြန်လည်ရေးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါမည်။
လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် PTB GO application သို့မဟုတ် www.ptbgo.com.mm တွင် အောက်ပါငွေပေးချေမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ (က) Cash On Delivery (COD) - ကုန်ပစ်စည်းရောက်ငွေရှင်းစနစ် (ခ) Credit and Debit Card (VISA/ Master/ MPU) - အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ ငွေပေးချေကဒ်ဖြင့်ပေးချေစနစ် (ဂ) KBZ Pay, AYA Pay, Sai Sai Pay, UAB Pay+ - မိုးဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ် Cash on Delivery (COD) - ကုန်ပစ်စည်းရောက်ငွေရှင်းစနစ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့လျှင် မိမိဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးသော ကုန်ပစ်စည်းလက်ခံရလျှင် ကုန်ပစ်စည်းအားစစ်ဆေးပြီး ငွေသားအား ပို့ဆောင်ပေးသူအား တခါတည်းပေးချေရပါမည်။ Credit and Debit Card (VISA/ Master/ MPU) - အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ ငွေပေးချေကဒ်ဖြင့်ပေးချေစနစ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့လျှင် မိမိတို့မှ ပို့ဆောင်ပေးသော ကုန်ပစ်စည်းကို မှန်မမှန်စစ်ပြီး လက်ခံရယူရပါမည်။ ငွေပေးချေးမှုအား မှာယူသည့်အချိန်တွက် ကောက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။ KBZ Pay, AYA Pay, Sai Sai Pay, UAB Pay+ - မိုးဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့လျှင် မိမိတို့မှ ပို့ဆောင်ပေးသော ကုန်ပစ်စည်းကို မှန်မမှန်စစ်ပြီး လက်ခံရယူရပါမည်။ ငွေပေးချေးမှုအား မှာယူသည့်အချိန်တွက် ကောက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။ *လူကြီးမင်း၏ မှာယူမှုသည် Cash On Delivery ဖြစ်ပြီး ကျသင့်ငွေမှာ ၅၇၅၀ ကျပ်ဖြစ်ပါက အတိအကျပေးချေခြင်း (သို့မဟုတ်) ၅၇၅၀ ကျပ်အား ၅၈၀၀ ကျပ်ပေးချေခြင်းဖြင့် အကြွေ ရှားပါမှုအခက်အခဲနှင့် အနည်းဆုံး ငွေသားထိတွေ့မှုဖြင့် ကူညီပေးစေလိုပါသည်။
ဘောက်ချာတွင် အခွန်အခများ ကောက်ခံထားပါသလား?
PTB GO မှ ရောင်းချသော ကုန်ပစ်စည်းများအတွက် Commercial Tax 5% အား ကောက်ခံပါသည်။ အခြားအခွန်အခများထပ်မံကောက်ခံထားခြင်းမရှိပါ။
အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ ငွေပေးချေကဒ်အား PTB GO application နဲ့ ptbgo.com.mm တွင် အသုံးပြုလျှင် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါသလား?
လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါသည်။ စိတ်ချလက်ချနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ VISA, Master နှင့် အခြား မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုတို့၏ ထိရောက်သော လုံခြုံနည်းပညာများကြောင့် ဈေးဝယ်သူအနေဖြင့်ကော ဈေးရောင်းသူ PTB GO ကပါ စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။